Geek Duramazwi, mamwe mazwi anoshandiswa pamambure uye isu hatinzwisise | Kubva kuLinux
Vazhinji vedu dzimwe nguva takarasika zvishoma (kana zvisiri zvachose) kana tichiverenga zvimwe zvataurwa mumaforamu kana masayiti zvakaenzana zvine chekuita netekinoroji.
Nguva zhinji isu hatinzwisise mamwe mavara asingazivikanwe kana mazita emazwi atinowana mumhinduro zhinji kubva kune vamwe vashandisi vepamberi uye kujairira mutauro we network yemambure.
Dzimwe nguva tinosvika pakufunga kuti vari kurwisa rurimi rwaamai, asi, kunyangwe ini ndiri mudziviriri akasimba wekuchengeta ruremekedzo nehunhu panguva yekuchinjana mumasevhisi edu epamhepo, hazvisi zvechokwadi kuti hazvimbove zvakawandisa kuziva izvo chimwe nechimwe cheizvi chinoreva mashoma mazwi.
Saka ndinofunga zviri nyore kugovana nevaverengi vedu iyi diki yekuunganidzwa kwema geek mazita uye zvavanoreva. Ndisati ndatanga, ndinoda kujekesa kuti kufarira kwangu hakusi kukurudzira mashandisirwo emazwi aya, chinangwa ndechekuwedzera denga redu rezivo zvishoma: senge icho kana kuti kwete, mutauro uyu unoshandiswa uye nhengo zhinji dzenharaunda yedu inyanzvi mazviri. kushandisa kwayo. Pasina imwezve ado, heino pfupiso yeduramazwi reGeek ...
Ndinojekesa kuti zvinosuwisa kuti mazhinji mazwi andinosiya pazasi ane zvirevo zvinonyadzisa, saka ndinofungidzira kuti zvinongokushandira iwe kuti uzive nezve kuvapo kwayo, sezvo kuno kuGUTL tine mitemo yedu uye kukanganisa kwakanyanya hakugamuchirwe mu makomendi. Yakajekesa iyi poindi, ipapo iwe enda.
4U: Yewe, yako.
4S: Kwatiri, kwatiri.
121: kuyemura munhu. Mune mamwe maforamu "121.gif" chiratidzo chinoratidza kunamatwa nekurumbidza kune mumwe mushandisi.
1337: / Liit / Leet taura kana leet (1337 5p34k kana 1337 mune leet script yatichakurukura mune imwe chinyorwa) imhando yekunyora ine mavara alphanumeric anoshandiswa nedzimwe nharaunda nevashandisi venhau dzakasiyana dzeinternet.
AFK: chirevo che "Kure Kubva Khibhodi", muchiSpanish "Kure Nebhokisi", inowanzo shandiswa, kunyanya mukutumira mameseji nemitambo yemavhidhiyo yepamhepo, kuratidza kuti mumwe haapo kana haagone kupindwa, achifananidzira "kure nekhibhodi".
ASAP: "Nekukurumidza". Nekukurumidza. Iyo inoshandiswa seyakajairwa kana mumwe munhu achitarisira mhinduro.
ASL: "Zera, bonde nenzvimbo". Inoshandiswa mukutaura kukumbira iyo yekutanga data yemunhu wauri kutaura naye, zera, murume uye murume nenzvimbo.
AFAIK: "Sekuziva kwangu". Sekuziva kwangu.
ATM: chirevo che "Panguva ino" (muchiSpanish: panguva ino).
AKA: "Zvakare Inozivikanwa Se" (inozivikanwawo se) inoshandiswa kureva zita remumwe munhu remadunhurirwa
BRB: / bérbe / Be Right Back (muchiSpanish: ndinodzoka).
BBL: chirevo che "Dzoka Gare gare" (muchiSpanish: ndinodzoka gare gare).
BRT: Iva Ipapo Ipapo (muchiSpanish: ndichave ndiripo)
BTW: Nenzira (muchiSpanish: nenzira ...)
BFN: Sara izvozvi (muchiSpanish: bhabhadzira izvozvi)
BB: Bye Bye (muchiSpanish: kuonekana)
Camper: mutambi uyo mune mumwe mutambo wepamhepo, kunyanya muFPS, anoramba asina kufamba munzvimbo akamirira muvengi, pane kuenda kumuvengi.
CT: Kubiridzira Tafura, Kubiridzira Matafura eiyo Cheat Injini
CYA: uko iyo C inonzwika senge "ona" uye YA inonzwika senge "Iwe", zvakare kunzi "kukuona" zvichireva kuti "Ndichazokuona gare gare"
Cracker: mumwe munhu anotyora kuchengetedzeka kwecomputer system kuti uwane pfuma yako kana kungokuvadza.
CDT.- Pfupiso inoshandiswa Shanduko yeNhau.
COD: chidimbu chemutambo "Kudana Kwebasa"
DI: Pfupiso ye "Hazvinei."
Usape chikafu troll: muchiSpanish "Usadyise troll". Iyo inoshandiswa sekurudziro yekudzivirira kuwira mukutsamwiswa kwetrolls.
DDMAM "Usazondikanganisa zvekare" zvinoreva ... usazondivhiringidza zvakare
DD: "Dharage Dealer" (mutengesi wekukuvadza) mutambi wechimiro anoona nezve kukuvara kukuru.
DPM: "De puta madre", inoshandiswa kana chimwe chinhu chiri kufamba zvakanaka, nenzira yakajairika
Dx: Chiso chehasha, chinopesana ne "xD"
D+: Shanduro muSpanish "De Más", taura chimwe chinhu chakanyanya kunaka, chinoshandiswa zvakanyanya muChat "
FF: chirevo che, muChirungu, "Fucking Fucker", iyo yaizodudzirwa ne "Fucking bastard!" kana chidimbu che "Final Fight"
FFS: acronym for, muChirungu, "For Fuck's Sake", izvo zvaizoshandurwa se "Fuck, nekuda kwerudo rwaMwari!"
Mafashamo: chirongwa kana chinyorwa chakagadzirirwa kuzadza kudzokorora spam.
the: Munhu Wokutanga Vanopfura. Yakashandiswa kureva kune Yekutanga Munhu Shooter mitambo.
the: Mafuremu pasekondi. Inoshandiswa kureva iyo nhamba yemafuremu kana mifananidzo mune yechipiri muvhidhiyo kana vhidhiyo mutambo.
frag: Frag nhamba inoverenga kuti kangani pawakauraya mumwe mutambi, anonyanya kushandiswa muFPS.
FTL: "Yekurasikirwa", inoshandiswa kuratidza kusafara.
FTW: "Yekukunda", inoshandiswa kuratidza kufarira kwechimwe chinhu.
FYI: "Zveruzivo rwako", iyo ichave "yeruzivo rwako"; inoshandiswa kujekesa chimwe chinhu.
FU / fak yu /: "Fuck You", zvinoreva kuti "fuck iwe"
FYEO: "Yezve meso ako chete", zvinoreva kuti "zveziso rako chete".
FYM: kusvira amai vako
Geek: / guik / munhu ane kufarira kukuru kwetekinoroji uye komputa, inovhara mhando dzakasiyana dzegeek kubva padanho rezvekufarira kusvika pamatanho ekuwedzera.
chap: / gueimer / munhu anofarira mitambo yemakomputa uye / kana vhidhiyo inonyaradza.
GTA- Pfupiso yemutambo "Grand Theft Auto".
GTFO: Bvisa / buda, muchiSpanish "buda"
GTG g2g: Wakaenda / Gouta gou / zvinoreva kuti "ndinofanira kuenda" kana "ndinofanira kuenda"
GL & HF: Rombo rakanaka uye unakirwe; rombo rakanaka uye unakirwe. Vatambi kana vashandisi vanoshandisa aya maAcronyms kukushuvira rombo rakanaka uye mutambo wakanaka.
GG: Mutambo Wakanaka (mutambo wakanaka). Iyo inoshandiswa pakupedza mutambo nevamwe vatambi.
GF: Kurwa Kwakanaka (kurwa kwakanaka). Inowanzo shandiswa mumitambo yekutamba.
GvG: Guild maringe neGuild, mumitambo, mhuri ichipesana nedzinza. Kazhinji inoshandiswa kuratidza hondo pakati pemhuri
GJ / Gj: Basa rakanaka (basa rakanaka). Inowanzo shandiswa mumunhu wekutanga shooter mitambo, kukorokotedza mumwe munhu kana timu, nezvimwe.
GBA- Pfupiso ye "Game Boy Advance" inochengetwa vhidhiyo mutambo koni.
GW- Ipfupi yeGuild Wars pamhepo mutambo-wekutamba mutambo.
GoW: chidimbu chekutaura nezve mutambo Mwari Wehondo
GC: chidimbu cheGood Charlotte uye kutaura nezve Nintendo Game Cube console.
Gratz: Kurumbidza (muSpanish makorokoto)
GM: GameMaster (Mutariri weMutambo)
Hacker: / jáquer / izwi rinoshandiswa kutaura kune nyanzvi mune rimwe kana mamwe matavi ehunyanzvi ane chekuita neruzivo tekinoroji uye nharembozha anofarira ruzivo, kutsvaga kana kudzidza zvinhu zvitsva uye kunzwisisa mashandiro azvinoita.
hax : / Jacs / Zvinoreva "Kubira" asi nemazwi "H4x0r". MuNetbattle inoshandiswa kune mutambi "ane rombo" sezvo vasingakwanise kukuvadza yavo Pokémon kana kazhinji kurova "Critical hit".
HC: aya maAcronyms ane zvirevo zvakapetwa muHabbo Hotel, mukuwedzera kune zvinoreva "Habbo Club" Ndivo vanhu vakatenga bhonasi yakakosha mune ino chat, inonziwo "Chulos Habbo" vanhu avo vanoshungurudza avo ropafadzo uye vanoshandisa zvese zuva vachikwesha mari yavo, chitarisiko chavo, kutuka, kana kuita senge Trolls (kushevedza ruzhinji Noob) nekuregeredza vamwe vashandisi. Nekuva HC vanowanzo deredza mazwi avo kumazwi matatu: HC, Vip naNoob.
Hdp: muchiSpanish, chidimbu che "Mwanakomana WaPuta".
HFH: muchiSpanish, chidimbu che "Hacela Fácil Huevon".
ANOPORESA: murapi, hunhu uyo ​​anotora chinzvimbo chekuporesa.
Hey: Mhoro (muchiSpanish: hello).
HL: Iva Nerombo (muchiSpanish: kuti kune rombo) mumitambo yepamhepo, usati watanga, kuda rombo rakanaka; zvinoreva zvakare hafu yehupenyu (mutambo wefps)
HОYGAN: spelling huori hwe "inzwa". Inonongedza zvine mutsindo kumagwaro akazara nezvikanganiso zviperengo uye nevanhu vanozvinyora.
HMS: Wakakuvadza kunzwa kwangu
HP: ipfupi kune "Mwanakomana wechihure." "Hutano poindi" hutano hutano. "Horse simba".
HQJ: ipfupi "Fuck iwe!"
HS: / hs - jedshot / chidimbu che "Musoro Wepfuti" (: musoro wepfuti). Inoshandiswa mumitambo yemavhidhiyo.
Kuvhimwa: / / hanted / iri izwi rinonyanya kushandiswa mune mimwe mitambo kureva munhu achimuudza kuti anovhimwa (vatambi havazorega kumuuraya), kana murume achinge ataura, zvakaenzana ne: "Ini ndichacheka mazai ako" uye kana akadaro mukadzi akaenzana na: "mubati chibharo uchafa" chero zvodii zvakada kufanana.
Hype: chigadzirwa chinogadzira tarisiro yakawanda chinoburitsa "hype". Inoshandiswa zvakanyanya pamitambo yemavhidhiyo inotarisirwa, kuenderera kwesaga nezvimwe.
IMO / IMHO / IMAO: chirevo che "Mune Pfungwa Dzangu" / "Mune Yangu Inininipisa / Pfungwa Dzakatendeseka" / "Mune Pfungwa Dzangu Dzinodadisa", Chirungu vhezheni yeEMHO, "Mune Humble Opinion".
IRL: chirevo che "MuHupenyu Hwechokwadi" ("Muhupenyu chaihwo").
ICBI: chirevo chekuti "Handitende" ("Handitende").
IMBA: chidimbu cheImbalance zvinoreva kusaenzana / kusaenzana. Iyo inoshandiswa kana mutambi ari pamusoro pevamwe, ndokuti, pwnea kubhegi.
IM: Instant Meseji, iyo ingaite seChat
IC: Insert Coin, inonyanya kushandiswa kuenderera mberi uchitamba mutambo wemachini, kana michina yekutsikisa.
I.O.W.: chirevo che "Mune Mamwe Mazwi" ("Mune Mamwe Mazwi").
ILU: Ini ndinokuda (Iyo U inotsiva iwe) kutaura kuti ndinokuda nenzira pfupi uye yakapfupikiswa
IGM: Mumutambo mesage Izvi zvinoshandiswa kuratidza maemail anoshanda mukati memutambo.
JIC: chirevo che "Just In Case" ("Just in case").
JK: chirevo che "Kungobata" ("Kuseka").
jamer: (yakafanana neKS) inoshandiswa mumitambo yekutamba kureva vanhu vanouraya zvikara zvevamwe vanhu, nokudaro vachibvisa yavo "ruzivo" (Pfungwa dzakawanikwa kubva kuchikara)
K / KK: chirevo che "OK" ("Zvakanaka, zvakanaka kwazvo"). MuchiSpanish, "que" (KAY kana Q inoshandiswa zvakare). Dzimwe nguva, kunyanya muMMORPGs, K ichiperekedzwa nenhamba yekujekesa (2k = 2.000) uye kk mamirioni (2kk = 2.000.000)
KEWL: rinoreva zvakafanana neshoko rekuti "kupora" (kukuru)
KS: chirevo che "Kill kuba" mumitambo yepamhepo, kunyanya muMMORPGS, ndiyo tsika yekuba mubairo wekuuraya muvengi, apo mubairo unogona kuve ruzivo mapoinzi, mari kana chimwe chinhu.
KH: Chidimbu chekutaura nezve mutambo-wekutamba mutambo "Humambo moyo"
KOF: Pfupiso yemutambo "King of Fighters"
KI: Pfupiso yemutambo "Muurayi Instinct"
chikwata: kuoma kunogadzirwa nekunonoka kwekutaurirana kunowanzo kukonzerwa nekundikana muinternet kubatana.
Kunanzva: / Leimar / munhu wemarambi mashoma (akasiyana neanobira, haazive mashandisiro emakomputa) uyo anoitawo ratidziro yekuziva. Iyo zvakare inoshandiswa mumitambo yepamhepo kureva kune avo vatambi vanowana mamaki nekuuraya vatambi vasina dziviriro (vasina zvombo), isingaenderane kana neine lag uyezve avo vasingazive kutamba kana maNewbies. Mumutambo weWarcraft 3 inoshandiswa kune vanhu Ivo vanorwisa hwaro hwemupikisi vasina kuperekedzwa nemakomputa-anotarisirwa anokambaira.
leecher: munhu anotora mukana nezviwanikwa zvevamwe pasina kupa chero chinhu kudzosera. Semuenzaniso tinobatanidza mifananidzo kubva kune mamwe maseva pasina mvumo, kana mune P2P, munhu anotora zvinhu zvakawanda asi achigovana mashoma kwazvo.
Leet: / lit / pakutanga l33t kana 1337 muASCII, zvinoreva vanhu vepamusoro, munhu kana boka rakanyatsonaka mumacomputer science science.
LOL: chirevo che "Kurasika paMutsetse", "Kuseka Kunze", zvakare "Roti Yekuseka", kuseka kune ruzha kana kuseka ndiko kushandurwa kwayo muchiSpanish. Kunyangwe dudziro yacho ichisiyana zvichienderana nehurukuro, inogona kushandiswa semuenzaniso kuseka pamamiriro achangobva kuitika, nekutsvinya pajee isina musoro.
LMFAO: / Limfao / chirevo chekusvora Kuseka My Fucking Ass Off uyo dudziro yake ichave "shit kubva kuseka" kwekuti "uchiwedzera" kuwedzera kusimbisa neshoko rekuti "fucking".
LMAO: / Limao / chirevo chehunyanzvi Kuseka My Ass Off iyo dudziro ingave "shit nekuseka."
LP: chirevo cheboka reAmerica "Linkin Park", "Long Play"
LPMQLP: ChiArgentina chirevo che "La puta madre que pario"
Lulo: Cheater, izwi rinowanzoshandiswa mumutambo wepamhepo "Counter Strike" kureva kune avo vanoshandisa zvirongwa zvinokanganisa mashandiro emunhu nekuuraya pfuti yekutanga nezvimwe zvinhu.
L2: chirevo cheiyo inozivikanwa online online-yekutamba mutambo Mutsara 2
Meme: Inoitika mu blogosphere uye iri posvo inopararira kubva kubhulogi kuenda kublog kuitira kuti iwedzere vashanyi traffic.
MILF: chirevo che "Amai Ndinoda kusvira." Inoturikirwa neakakurumbira MQMF (Amai vaizondibata) kubva muvhi American Pie.
MMORPG (Massive Multiplayer Online RPG) - Massive multiplayer online online-yekutamba mutambo. Ndiwo mutambo wakafanana neiyo yekare RPGs (Yekupedzisira Kufungidzira, Diablo, Tibia, Gedhi reBaldurs, nezvimwewo), asi yakanangana nekutambwa paInternet uye nevanhu vazhinji panguva imwe chete.
MP: Mana Points: mana mapoinzi, (inonziwo muDofus yekufambisa mapoinzi) mune mamwe maforamu anozivikanwa seMeseji Meseji kana PM (zvakavanzika meseji)
M8: / meit /, zvinoreva shamwari, komuredhi, nezvimwe.
MF: ipfupi kuna Amai Fucker
MK: ipfupi kumutambo "Unofa Kombat"
MCR: ipfupi kune My Chemical Romance
NH: expression muChirungu zvinoreva kuti / Nice Ruoko /, muchiSpanish, ruoko rwakanaka. Inowanzo shandiswa mu poker. Zvakare inoshandiswa muKudzivirirwa kweVakare zvinoreva kuti / Kwete Gamba / izvo zvinoratidza kuti gamba hariwanikwi munzvimbo yakaratidzwa.
NPI: chirevo che "Ni Puta Idea". Inoshandiswa zvakanyanya mumaforamu mausingakwanise kushandisa zvinosemesa, zvinonyadzisa, mazwi akashata, nezvimwe.
Noob: / newbie / izwi rinoshandiswa kureva newbie mumutambo wepamhepo, foramu, kana nyika yeInternet. Mumitambo yepamhepo inowanzo shandiswa kunozvidza kune avo vatambi vasina ruremekedzo kune vatambi kana mitemo, kana kungovaziva, kuvakuvadza nekugadzira kusagadzikana kune vamwe vatambi uye nekusimudzira kwese kwemutambo. (Kazhinji kutaura komputa mitambo troll)
NP: expression kuChirungu zvinoreva / hapana dambudziko /, muchiSpanish, hapana dambudziko. Inoshandiswa zvakanyanya mumitambo yepamhepo kuitira kuti ipe inokurumidza uye ipfupi mhinduro kune waunoshanda naye uye kwete kutambisa nguva.
NS: Acronym ye / Nice Shot /, muchiSpanish, yakanaka pfuti. Iyo inoshandiswa muShooter kukorokotedza mumwe munhu, angave shamwari kana muvengi, nekugadzira pfuti yakanaka kana kutamba kwakanaka.
NSFW: Haisi yakachengeteka kubasa, muchiSpanish "haina kuchengetedzeka kubasa"; inoshandiswa kumisikidza zvemhirizhonga, zvepabonde kana zvisinganakidze zvemukati izvo zvingave zvisina kukodzera munzvimbo yebasa.
N64- Pfupiso ye "Nintendo 64" vhidhiyo mutambo koni
NFS: chidimbu che "Kwete Kutengeswa". Iyo inoshandiswa mumitambo kuratidza kuti chimwe chinhu hachisi kutengeswa. Inogona zvakare kureva Kudiwa kwekukurumidza.
"O RLY?". O RLY? / YA RLY / HERE WAI: / ohreli? - yareli - nowei / chidimbu che "Ah Chaizvoizvo?", Ndeipi inogona kuturikirwa muchiSpanish se "Zvakanyanya?" Inowanzo shandiswa muchimiro chekunyomba pamberi pechinhu chechinhu chiri pachena kana kupokana kana kupindura chinhu chisinga vimbike kwazvo. Inopindurwa neYA RLY zvinoreva kuti "Hongu, chaizvo" (Hongu, zvakakomba), ichiteverwa na "HAPANA WAI" (Kwete, Hazvigone kuva).
OMG: / omj / chidimbu muChirungu che "Oo Mwari wangu!" dudziro yavo muchiSpanish "Oh Dios mio!".
OFC: / ofcurs / chidimbu muChirungu che "Ehe!" dudziro yavo muchiSpanish "Por Supuesto".
OMFG: / omfj / chidimbu muChirungu che "Oo Mwari Wangu Anonamira!" kushanduka kwe OMG.
OMW: chidimbu muChirungu che "Ndiri kuenda" muchiSpanish, "Ndiri munzira."
Akapiwa: / ound / pakutanga yaishandiswa nevanobira uye nyanzvi dzemakomputa, izwi rinoreva kukanganisa kukanganisa kwehurongwa, kuwana kuzara kana kuwana midzi. Izvo zvazopararira, zvichiratidza kukundwa kunopwanya kwemumwe mushandisi pamusoro peumwe mumitambo yepamhepo. Izvo zvinogona zvakare kuonekwa se "pwned" / pondo / iyo inozvarwa nekunyora zvisirizvo "muridzi" kutsiva "o" pa "p". Izvo zvinoshandiswa zvakare kuratidza kusaziva kwemumwe munhu nezveimwe nhaurwa, kana sekuseka kana mumwe munhu anga akaipa. Mimwe misiyano iri 0wned, Own3d, pwned, pwn3d, uye powned. Ndiwo mutsara mukuru wecokie monster.
OIC: chidimbu muChirungu cheO! Ndazviwona! dudziro yavo "Ndinoona"
OOP: / oop / chidimbu muChirungu che "Kunze Kwenzvimbo" muchiSpanish zvinoreva kuti "Kunze kwenzvimbo". Iyo inoshandiswa kuratidza kuti hausi paPC, inowanzo shandiswa muMSN Messenger kuratidza kuti hausi pakombuta, kunze kwenzvimbo ye "Kure".
PCW: kuchinjirwa kweChirungu "Practic Clan War", "Friendly Party". Inonyanya kushandiswa mumitambo yeFPS.
PLZ: kuchinjika kweChirungu "Ndapota", "Ndapota". Inoshandiswa kukumbira mumwe munhu chinhu chakakosha. Inonyanya kushandiswa mumitambo yeMMORPG.
pr0n: kuchinjika kweChirungu "porn", muchiSpanish "porno". Yakashandiswa kureva zvemukati
zvinonyadzisira. Izwi rekuti "p0rn" rinoshandiswa zvakare. Inoshandiswa kutenderedza iyo Izwi Sefa yeMMMORPGs
plop: yakafanana neruzha rwekuti kana munhu adonha..izvo zvinonzwika plop (inodonha nekuti zvakapusa zvakataurwa nemumwe) zvinonyanya kushandiswa mukutaura
PK: Mutambi Killer. Inoshandiswa mumitambo yemavhidhiyo, kana mutambi achiuraya mumwe pasina kururamisa, kazhinji mummmmg mitambo
PKT: ndiko kupfupikiswa kwepakete, izwi rinoshandiswa kunyanya mumitambo yepamhepo kuratidza vanhu varambwa mumutambo, ona amok
PRO: ndicho chidimbu cheProfessional, zvinonzi nezve avo vanhu vanoziva kubata "mutambo" (komputa) zvakanyatsonaka. Inoshandiswa zvakare kureva mutambo waKonami "Pro Evolution Soccer".
PTI: Ndiyo shanduro yeSpanish yeFYI, uye yaizosvika pakureva "Zve Ruzivo Rwako".
PST: chirevo chinonyatsonzwisiswa nezwi ... zvinoreva icho chinhu chakadai iwe hey.
PvP: ndiko kupfupiswa kweMutambi maringe neMutambi (mutambi achipikisana nemutambi). Iyo inoshandiswa mumitambo yeMMORPG.
PTME: ndicho chidimbu chaPuta Madre. Iyo inoshandiswa kupfuura chero chinhu chiri muchata
PS: spit inonzwika senge "ps" oe ps melas ... inoshandiswa chete nevaPeruvia, Venzuelan, maMexico nemaLatinos nemaHispanica mazhinji.
kugovana purofiti: Chilean acronym for "Kick In The Raja"
r0x : Izwi rinoshandiswa mu netbattle kureva mutambi anokunda vamwe achishandisa pokemon imwe chete.
ROFL / ROTFL: chirevo che "Rolling On The Floor Kuseka", muchiSpanish "Kuumburuka pasi kuseka" uye deformation yeLOL iyo inoreva kuseka kusingadzoreke, dzimwe nguva kuputika.
ROFLMAO: chirevo che "Kutenderedza Pasi Pasi Kusekerera My Ass Off", muchiSpanish "Kuumburuka pasi uchityora mbongoro yako kuseka" kana "shit kuseka pasi"
RTFM: / rìdefama / acronym ye "Verenga Iyo Fucking Chinyorwa", muchiSpanish "Lee el puto / jodido / puñetero / culiao bhuku". Iyo inoshandiswa kupindura mubvunzo uyo ungadai usina kudikanwa dai bhuku racho raverengerwa.
RU: chirevo che "Uri Iwe?", "Ndiwe?"
RMK: chirevo che "Remake", "Dzorerazve". Inoshandiswa zvakanyanya mumitambo yepamhepo kurodha zvakare mepu yemutambo.
MTCR: Kubvumirana (Chile). *
RLZ: mitemo. zvinoshandiswa sekutaura kuti "ndizvo zvakanakisa" kana "izvo zvinoraira"
RS: chidimbu chemutambo RuneScape, zvinoreva zvakare "kudzoreredza" (chiSpanish: tarisa apo mutambi anoonekazve mushure mekunge vamuuraya, kazhinji iri kuzasi kwechikwata chake)
RSS: Chidimbu chayo chinoratidza (Chaizvo Chiri Nyore Syndication). MuChirungu zvarinoreva "kushambadza zvinyorwa panguva imwe chete mumidhiya akasiyana kuburikidza nekwairi"; kazhinji inonzi "RSS feeds".
RE: Ipfupi pamutambo unozivikanwa unotyisa "Mugari akaipa"
Gidza: musangano wakasarudzika pakati pemhuri mbiri, zvinonyanya kuitika muFPS.
STFU: Shutira Iyo Fuck Up: inogona kureva zvakashata kune "Shut the fuck up!"
STFW: Tsvaga iyo Fucking Web: "tsvaga iyo fucking webhu", zvichireva kuti iwe unofanirwa kutsvaga usati wabvunza zviri pachena.
SOM1: Mumwe munhu, mumwe munhu.
pomuparadzi: kubva kuChirungu "Spoil" ine dudziro chaiyo iri "kuishatisa (iyo), kuiparadza (iyo) kutambisa, nezvimwewo" chirevo chakashandiswa chinogona kunge chiri "kukanganisa zano kana zano" uye chinogona kushandiswa kana mumwe munhu akataura nezvemabhuku, mafirimu, mitambo, nezvimwe. kufumura zvemukati kana zvakakosha zvikamu zvacho.
SYL: Tokuona Gare gare: "Ndinokuona gare gare" zvichireva kuti "tinoonana gare gare" kana zvimwe zvinoshandiswa muchiSpanish se "tinoonana"
SBLN: yakanakisa mambure, izwi raishandiswa kutaura kuti unobvumirana
SPAM: MuInternet foramu, mapfupi asina revo "mapositi" asingasviki gumi mazwi anonzi spam
SSB: ipfupi kumutambo "Super Smash Bros".
SF: ipfupi kumutambo "Street Fighter"
SC: chidimbu chemutambo "StarCraft"
RWIYO: chidimbu cheChirungu "Ndine hurombo" icho muchiSpanish chinonzi "Lo Siento".
TANI: tank melee-mhando mutambi anotungamira boka (mitambo-yekutamba mitambo)
CBT: chirevo che "Zvinozivikanwa Se", muChirungu AKA, "Zvakare Zvinozivikanwa Se".
TK: Mhondi yechikwata. Inoshandiswa mumitambo yemavhidhiyo, kana mutambi achiuraya mumwe wechikwata chake pasina chikonzero, mune vanopfura vechikwata kazhinji TFTI: chirevo che "Kutenda neruzivo", muchiSpanish "ndatenda neruzivo." Inoshandiswa muzviitiko zvakawanda nenzira yekunyomba kana isinganzwisisike yezvinhu zviri pachena nezvekuti ndeupi ruzivo rwakawandisa uye rwakawandisa rwunopihwa.
TLDR: chirevo che "Yakareba, usaverenge" (yakarebesa, usachiverenga). Inowanzo shandiswa mumaforamu.
Troll: munhu anoita zviito zvinovhiringidza nechinangwa chega chekukwezva kutarisisa uye kunetsa.
Ty: Ndinokutendai, muchiSpanish, ndinokutendai zvikuru.
THX: Thanks, maita basa
TNX: Thanks, gracias [imwe nzira yekureva kuti Maita TMTH: Kune Zvakawanda Zvokubata
U2: Nemiwo, nemiwo, zvakaenzana.
U: Iwe, iwe, iwe.
UR R8: Warevesa, wakarurama.
Vip: Anonyanya Kukosha Munhu.
Vit: Yakakosha Nguva.
WTB: acronym "kuda kutenga" inoshandiswa mumitambo yepamhepo. Yakashandurwa kuti "Ndinoda kutenga"
wtf / guatafak / : chidimbu che "Chii Chinobaya?" (Asi chii fuck / fuck / shit / weá?), Chirevo muChirungu kuratidza kushamisika kana kushamisika, kana kuratidza kusawirirana.
WTH: Acronym "Chii Iyo Hero?" (Asi chii nhai?)
WTS: acronym "kuda kutengesa" inoshandiswa mumitambo yepamhepo. Yakashandurwa kuti "ndinoda kutengesa"
WTT: acronym "kuda kutengesa" inoshandiswa mumitambo yepamhepo. Yakashandurwa kuti "Ndinoda kutengesa"
W8: zvinoreva Mirira, nekuti kuChirungu iyo 8 inonzi "sere" uye kana iyo W + 8 ichidudzwa zvakafanana nemazita ainoitwa Mirira (muchiSpanish: mirira).
WOW: chirevo che "World of Warcraft", mutambo unozivikanwa weMMORPG kubva kuBlizzard
XOXO: yaishandiswa kuratidza kutsvoda, iri zvakare izwi rinoshandiswa kufananidzira "kutsvoda nekumbundira"
xD: aishandisa kuratidza kuseka. Iyo haina dudziro. Inomiririra kumeso kuseka, iyo "x" ndiwo akavhara maziso uye iyo "D" kunyemwerera
xP: aishandisa kuratidza kuseka nekuburitsa rurimi (sekubva kuna "Naughty"). Iyo haina dudziro. Inomiririra kuseka kwakaipa, iyo "x" maziso akavharwa uye "P" ndiwo muromo unoburitsa rurimi.
XXX kana xxx: Yakafananidzirwa kushandurwa kwe "Kutsvoda", inowanzo shandiswa kutaura zvakanaka kune mumwe munhu, mukutaura kana neemail.
Exp: kubva kuChirungu "Chiitiko", kuratidza ruzivo rwemutambi, kana kuti ingangoshandiswa se XP, Inogona zvakare kushandiswa kuratidza kuseka nerurimi kunze xP
mabviro: Chinyorwa chakatorwa kubva kuGUTL.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Geek Duramazwi, mamwe mazwi anoshandiswa pamambure uye isu hatinzwisise
Ndinonzwa kunge noob>.
0.0… Ini ndaisatomboziva mazwi gumi… zvinotoenda kune vandinofarira
Yakanaka posvo yeinternet n00bs.
Nekudaro kune zvinokurumidza mareferenzi ini ndinofarira kushandisa Urban Dictionary kana Internet Slang (ese ari maviri anowanikwa kune akati wandei mabhatani kubva kuiyo huru Chromium).
Hezvino izvo, nenzira: M3H43NC4N74D0L0D335CR181R3N L337
€ $ Ø n0 3S Näðæ © ®4®æÐ0 ¢n Ł0 Ωü € ¥ § ¥0 ¥ © æþ4z Ð € Ħ4 ¢ 3®
icho hapana kana chichienzaniswa nezvandinokwanisa
Uye IZVO ZVANDAKANYORA MUZVINONYANYA KUSHANDISWA, BWAHAHAHAHA
Iwe uri cani hongu kana hongu
Pindura kuna Whowne
Bharon ashler akadaro
Orale iyo yakanaka vibes, ndatenda zvikuru kune chaunofarira ADD post
Pindura Baron Ashler
Pindura kuna Goss
Max Simbi akadaro
Kunyangwe ndichifunga kuti posvo sereferenzi yakanaka uye inodzidzisa, ini ndinofunga kuti mhando yechinhu ichi inongounza kumonyaniswa kwemitauro uye inogumira kutaurirana sezvo chiri chinhu chimwe kushandisa mutauro wehunyanzvi uye zvakati wandei kuda kupfupisa kana kutema mazwi sekunge mumwe munhu kubhadharisa kunyora zvakanaka kana tsamba.
Pindura kuna Max Steel
Bvumirana zvizere, munguva pfupi ivo vanozofanira kugadzira chimwe chinhu kuti vakwanise kududzira zvakataurwa pawebhu.
Izvo zvinonyadzisa nekufuma uye kuwanda kwemazwi echiSpanish ari mune ese akasiyana ayo atinofanira kushandisa aya mashoma "kutaurirana" maitiro.
Nditende, ndiri pakati pevokutanga kutambura kubva mumikoko pandinoona zvirevo zvakadai
Ini ndaiti ini handikwanise kuenda kuLinux ..
Asi chinangwa chechinyorwa chino ndechekungopa chirevo chemazwi anoshandiswa, kuti tirege kurasika 😀
hahahaha internet slang inonakidza kwazvo, vazhinji ndaivaziva uye vamwe vanga vasati vambovaona, chandinonyangadza zvakanyanya seyev anoti «zzZZZzNN LazZ p3rzZzonAz ke 3ZzkriBenNn azZzi» aaaaaaaaaaiiiisshhhh izvo zvinonditsamwisa!
Ndiwo mumwe mutauro !!! Mitauro yese ichabviswa uye izvi zvicharamba zviri semutauro wepasirese here? hehe
Ndinovenga mutauro wevatorwa vanhu pa internet. Uff ... Ini ndinongotaura Spanish neChirungu, handisi kufarira kudzidza iwo mutauro hahahaha makore mashoma apfuura iyo «h4cx3rz 3skr1b14an 4s1» uyezve ivo vakandibvunza nezve «chirongwa chekubira» hahahahaha inguvai dzakanaka idzo 😛
Pindura kuna wada
MDR: kubva kumaforancophone maforamu «mort de rire», «akafa kuseka»
Pindura kuna leeuw
Inokurumidza kubatsira mwanakomana wangu cn shamwari dzake dzakanyorwa mukodhi 8 kana 9 kana 10 unogona kundiudza zvazvinoreva?
JEAN CARLOS RODRIGUEZ akadaro
NDINOZVIDA IZVOZVI KANA NDOGONA KUTAURA NEVANASHAMWARI SEZVANDINOGONA
Pindura kuna JEAN CARLOS RODRIGUEZ
Zvakanaka, kana nenzira iyi uchinzwisisa zvirinani zvese zviri pawebhu,
Asi mutauro wechisikigo ndiwo wakanyanya kunaka,
Kana tikataura muchidimbu uye zvipfupiso, panenge pasina angatinzwisisa. 🙂
Rolando Medrano-Pacheco akadaro
Inonakidza kwazvo. TKVM.
Pindura Rolando Medrano Pacheco
Ndine mubvunzo unoreva kana mukadzi akati "Ndiri kufara ndatenda kwamuri (M)"
Iye kana anga ari musikana wangu asi chokwadi ndechekuti, ini handina kunyatsonaka nazvo, akandibvunza kwekanguva uye ndinoda kuziva zvazvinoreva
Pindura kuna juanito
Unogona kundiudza zvinorehwa neXLZP? ndapota uye QDCB?
Ini ndanga ndichitsvaga iyo m8: v 2spooky5shrek KK
Ndiri kungoda kuziva kuti zvinorevei kuti tsamba idzi zvine kana zviriko kubhokisi rekutarisa kana imwe ngdgda social network
Ndatenda, ini handisi yakawanda mitambo, izvi zvinondibatsira yakawanda XD
Ndiani anogona kundiudza uyu meseji:
Ubuntu Runhare ruchave ruchizowanikwa muna Kukadzi 21
Apper: Chengetedza mapakeji ako mu KDE